News 18 Nepal || राजनीति
आज यी ठाउँबाट निस्कनेछ प्रचण्ड माधव समूहको जुलुस
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज काठमाडौंमा बृहत शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा यसअघि देशभर विरोध कार्यक्रम गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज काठमाडौंमा बृहत प्रदर्शन र सभा गर्न लागेको हो । बिहान ११ बजे पार्टी स्थायी कमिटी सदस्यहरुको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरेको छ । माइतीघर मण्डला, डिल्लीबजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनीमार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्तिबाटिका र बाल्मिकी क्याम्पसलगायत स्थानबाट जुलुस निस्किनेछन् । जुलुसमा...
‘पदको लगावले प्रचण्ड सडकमा पछारिए’
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदको लगावले सडकमा पछारिन पुगेको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा प्रेस संगठनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रायमाझीले अहिलेको अन्तरविरोध नितान्त पदीय झगडा भएको बताएका हुन् । पदकै आकांक्षाले प्रचण्डलाई सडकमा पुर्‍याएको जिकिर पनि उनले गरे । “हुँदाहुँदा संसद् विघटन भइसक्यो, प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्दै हिँडेका छन् । उहाँलाई चुनाव लड्नु पर्दैन । ३३...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले भोलि देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । वडाको प्रदर्शनलाई पनि सक्रिय सहभागिता जनाएर सफल बनाउन सभापति देउवाले अपिल गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र जनमत विरुद्ध भएकोमा कांग्रेस एकमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल, जनभावना विपरीतको कार्यविरुद्ध...
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री, काँग्रेससँग आफ्नो समझदारी’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले मंगलबार बेलुकी एक टेलिभिजनमा अन्तवार्ता दिँदै संविधान र प्रणाली बचाउका लागि देउवा वा देउवाले भनेको अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्रधानन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको प्रचण्डको भनाइ छ । उनले अबको केही दिनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने पनि खुलाएका छन् । प्रचण्डले भने, ‘शेरबहादुर देउवा जी...
प्रचण्डजी ! फेरि नेपाली जनताले बलिदान दिनु पर्ने कारण के छ ?
काठमाडौं । नेकपाको विघटित प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरीले प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गरेकी छिन् । उनले ‘मांसाहारी आन्दोलन भनेर शान्तिकामी नेपाली जनतालाई पटक–पटक किन द्वन्द्वमा धकेल्नु हुन्छ ?’ भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत चौधरीले नेपाली जनता कसैको रैती नभएको भन्दै कसैलाई पद र शक्ति चाहिँदा भर्‍याङ बन्न नसक्ने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘नेपाली जनता तपाईंका रैती हैनन्, तपाईंलाई जति बेला...